တရုတ် OZM ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်စက်ရုံ |ညှိထားသည်။
ပါးစပ်ပါးလွှာသော ဖလင်ပြုလုပ်သည့်စက်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် ပါးစပ်ကွဲသွားသည့်ရုပ်ရှင်များ၊ ပါးစပ်မှ အမြန်ပျော်ဝင်နိုင်သော ဇာတ်ကားများနှင့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းများကို လန်းဆန်းစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေးနှင့် အစားအသောက်လုပ်ငန်းများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
Oral Films ၏အင်္ဂါရပ်များ
■ လျင်မြန်စွာ ပျော်ဝင်ခြင်း၊ ကြီးစွာသောအကျိုးသက်ရောက်မှု၊
■မျိုချရလွယ်ကူသည်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးဆန်ဆန်၊
ထုတ်လုပ်မှုအရှိန် 0.02-1.5m/min (အမှန်တကယ် အခြေအနေနှင့် ပစ္စည်းအပေါ် မူတည်သည်)
Winding Diameter ≤φ350mm
အပူပေးပြီး အခြောက်ခံနည်း အပူပေးရန်အတွက် ပြင်ပသံမဏိလျှပ်စစ်အပူပေးပြွန်၊ လေပူလည်ပတ်မှုအတွက် centrifugal ပန်ကာ
အပူချိန်ထိန်း 30-100 ℃ ± 0.5 ℃
ODF စက်သည် အရည်ပစ္စည်းများကို ပါးလွှာသော ဖလင်အဖြစ် ဖန်တီးရာတွင် အထူးပြုပါသည်။လျင်မြန်စွာ ပျော်ဝင်နိုင်သော ပါးစပ်ရုပ်ရှင်များ၊ trans films နှင့် mouth freshener strips များကို ဆေးဝါးနယ်ပယ်၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် စသည်တို့တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချနိုင်သည် ။
မြင့်မားသောဆေးပမာဏတိကျမှု၊ လျင်မြန်စွာပျော်ဝင်မှု၊ လျင်မြန်စွာထုတ်လွှတ်မှု၊ အစာမျိုရခက်ခဲမှု၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်ကလေးများလက်ခံမှုမြင့်မားသည်၊ သေးငယ်သောအရွယ်အစားကိုသယ်ဆောင်ရန်အဆင်ပြေသည်။
စက်၏လုပ်ဆောင်မှုနိယာမသည် reel base roll ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အရည်ပစ္စည်းအလွှာကို အညီအမျှ ဖုံးအုပ်ထားသည်။အခြောက်ခံချန်နယ်မှတဆင့် လျင်မြန်စွာ အငွေ့ပျံပြီး အခြောက်ခံသော အရည်(အစိုဓာတ်)။အအေးခံပြီးနောက် အကွေ့အကောက်များ (သို့မဟုတ် အခြားပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ပေါင်းစပ်ပါ)။ထို့နောက် ရုပ်ရှင်၏ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ (ပေါင်းစပ်ရုပ်ရှင်) ကို ရယူပါ။
ဤစက်ပစ္စည်းများသည် စက်၊ လျှပ်စစ်၊ အလင်းနှင့် ဓာတ်ငွေ့များ၏ ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာကို လက်ခံထားပြီး ဆေးဝါးလုပ်ငန်း၏ "GMP" စံနှုန်းနှင့် "UL" ဘေးကင်းရေးစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဒီဇိုင်းကို ဆန်းသစ်တီထွင်ပါသည်။Film Making Machine တွင် ရုပ်ရှင်ဖန်တီးခြင်း၊ လေအခြောက်ခံခြင်းနှင့် အခြားအင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။ဒေတာဘောင်များအားလုံးကို PLC ထိန်းချုပ်မှုဘောင်မှ ထိန်းချုပ်ထားသည်။မော်ဒယ်သည် စဉ်ဆက်မပြတ် တိုးတက်မှု၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပါးလွှာသော ဖလင်ဆေးအသစ်များ၊ ၎င်း၏ ထိပ်တန်းပြည်တွင်းအဆင့်အထိ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် နည်းပညာနှင့် တင်သွင်းသည့် စက်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုလက်တွေ့ကျပြီး ချွေတာနိုင်စေပါသည်။
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှု၊ ကွန်ဆိုးလ် 1 အုပ်စု (လူ-စက်မျက်နှာပြင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှုအားလုံးနှင့် ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ စက်တစ်ခုလုံး၏ ဆက်တင်များ)
1. Unwinding ယူနစ်
ယူနစ်နှစ်ခု (တစ်ခုတည်းသောဘူတာအမျိုးအစား)- တင်းမာမှုထိန်းချုပ်မှု- တစ်ပိုင်းအော်တိုထိန်းချုပ်မှု (Suzhou Lan ling- 2.5kgf သံလိုက်မှုန့်ဘရိတ်၊ တင်းမာမှုထိန်းချုပ်ကိရိယာ)
2. Coating ယူနစ်
တစ်စုံ (အခြောက်ခံမီးဖို2မီတာ၊ အပူဧရိယာ နှစ်ခု)
တစ်ယူနစ် (ဘူတာရုံတစ်ခုတည်း အကွေ့အကောက်များ)
ယခင်- ထိပ်တန်း ပေးသွင်းသူများ Film Strip Projector - OZM Film Making Machine - ညှိထားသည်။
နောက်တစ်ခု: အလိုအလျောက် ပိုင်းဖြတ်ခြင်းနှင့် အခြောက်ခံစက် (ပါးစပ်ရုပ်ရှင်များအတွက်)